Ndozvakaitawo Apple Watch Series 4 ichivaenzanisa nemhando dzekare | Ndinobva mac
Kusarudza wachi ndeyako wega. Kana isu tichisarudza chero gadget kubva kuApple tinotarisa pane zvatinoda. Kune rimwe divi, patinosarudza wachi, pamusoro pezvinodiwa isu tinotarisa kuti inotaridzika sei pachiuno chedu.
Zuva rapfuura zuro Apple yakaunza mhando nyowani dzeApple Watch, mumatanho maviri 40mm uye 44mm. Muchikamu chino tinoda kukuratidza kuti imwe yemamodheru inotaridzika sei pachiuno chemushandisi wepakati, uye enzanisa kubva ipapo, neApple Watch Series 3 iyo yataive nayo kusvika zvino pamusika. Uye izvi zvinogara zviri munzira yekuzviisa pasi, nekuti kana tikapinda nyaya yekuravira, mumwe nemumwe ane maonero akasiyana.
Yekutanga fungidziro yatinofanira kufunga nezvemawatch eApple ndeyekuti haigadzi mhando mbiri, imwe yevarume uye imwe yevakadzi. Iyo Apple Watch ndeye unisex modhi. Naizvozvo sarudzo inofanirwa kungova manzwiro edu kana zvatinofarira maererano nemhando yakakura kana diki. Pano sarudzo yekutenga haina kubva pane yakakura zvirinani, kana zvisiri uyu mubvunzo wemuviri.
Zvakare sezano. Kana iwe usati wave neApple Watch pachiuno chako, iwe unowana huviri kunzwa. Chekutanga kunyangwe iyo hombe modhi ichaita sediki. Asi panguva imwecheteyo, isu ticha shamiswa nekumhanya kwazvinoita mune chero chiito, kunyanya zvakanyanya neiyo kuvandudzwa kwewatchOS 5 nekumisikidza kwemaitiro matsva kuita zviito zvine hungwaru. Nenzira iyi, chinhu chakanakisa kungave kuyedza Apple Watch mumunhu wekutanga uye tora yako mhedziso.
Muchikamu chino, iwe unowana mifananidzo yakasiyana iyo ichatipa isu yekutanga kuratidzwa kweApple Watch Series 4, achienzaniswa nematanho eakautangira. Iyi mifananidzo yakadzvanywa kuitira kuti iwe ugone kuiprinta muhukuru chaihwo kuti uone kuratidzwa kwemodhira pane ruoko rwako.
Kune rimwe divi, ndikuudze izvozvo Unogona kuchengetera Apple Watch Series 4 kubva nhasi wechi14 uye uchave nayo kumba kwako pamberi pa 21. Mitengo yemhando iyi inotanga pa € ​​429.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Aya ndiwo maratidziro anoita Apple Watch Series 4 achienzaniswa neyekare mamodheru